🎟️ Soo jiidasho | Booqo Hultsfred
Baro meelo cusub
Sidee ugu wanaagsan ee aad ku ogaan kartaa Hultsfred? Maxaan seegin oo maxaa indha indheeya ayaa jira? Waxaan diyaarinay talooyin aad uwanaagsan oo ku saabsan waxaad nala sameyn karto oo aan rajeyneyno inay kaa caawin doonaan safarkaaga daahfurka!
Godka Lasse-Maja ama Stora Lassa Kammare wuxuu leeyahay sheeko xiiso leh oo la sheego. Godkan dhexdiisa, dadka ku nool tuulada Klövdala waxay magan u galeen deenishka 1612. Sida laga soo xigtay
Waddada cidhiidhiga ah ee Hultsfred-Västervik waxay dhererkeedu dhan yahay 7 km, ballacuna dhan yahay 891 milimitir, waxay ka bilaabataa kaymaha Småland ee galbeedka, harooyinka hore, bulshooyinka yaryar iyo beeraha ilaa dhulka jasiiradaha.
Målilla Gårdveda Hembygdspark waa mid ka mid ah jardiinooyinka ugu waaweyn uguna firfircoon Iswiidhan. Waxqabadyadu waxay halkaan ka dhacaan sannadka oo dhan, beerta waxaa si joogto ah loogu ballaariyaa soo jiidasho cusub. IN
Kungsbron, oo ku taal Emån, waxay ahayd goobta dagaalka ee 1612 mid ka mid ah dagaalladii ugu horreeyay ee Gustav II Adolf ee ka dhanka ah deenishka. Dagaalkii Kungsbron At Kungsbron ee Järeda
Kaniisadda hadda jirta ayaa laga yaabaa inay tahay ta saddexaad ee isla goobtaas ka jirta. Markii kaniisaddii ugu horreysay la dhisay lama yaqaan oo dukumiintiyada qoran ayaa gebi ahaanba la la'yahay. Taasi kaniisadda
Sida ku xusan halyeeyga, dhaawaca Nils Dacke waxaa lagu qariyey magaalada Dackegrottan oo laga fogeeyey ciidamada Gustav Vasa. Nils Dacke wuxuu hogaaminayay beeraleyda Småland intii uu socday kacdoonkii looga soo horjeeday Gustav Vasa. Iyadoo
Dhagax xusuustii Oscar Hedström
Oscar Hedström wuxuu ka mid ahaa aasaasayaashii mootada Hindiya. Wuxuu ahaa injineerka sare. Oscar Hedström wuxuu dhisay noocoodii ugu horreeyay sanadkii 1901. Wuxuu ku fiicnaa naqshadeeye, kaas
Hagelsrums waxay qarxisaa foornada
Shan kiilomitir waqooyi-bari Målilla, dhacdadii Silverån waa tuulada Hagelsrum. Waxaa jira hadhaagii foornadii saddexaad ee ugu dambaysay ee Hagelsrum. Foornada qaraxa waxaa la dhisay 1748. Waqtigaas
Dhulka keymaha ah ee kuyaala Björkmossa waxaa ku yaal iskutallaab alwaax ah oo ay ku xardhan tahay “waan jiifaa oo waan seexdaa mana dhinto, Rabbi ha cafiyo dunuubtaan i saartay.